सबैभन्दा ईमानदार युरोपियन भविष्यवाचक बिल्कुल निस्टार्डमस को बारे मा निष्पक्ष रूप देखि विचार गर्दै छन्। हामी यस मिथलाई खारेज गर्छौँ।
फ्रांसीसी अलचेस्टर र फार्मासिस्ट - यस्तो उग्र शीर्षकको लागि धेरै विवादास्पद चित्र: उनीहरूको भविष्यवाणीहरू धमिलो हुन्छन् र विशिष्ट मितिहरूमा बाँधिएका छैनन्। अल्बर्ट द ग्रेट, जो 1200 देखि 1280 सम्म रह्यो, धेरै अधिक सटीक भविष्यवाणी गरे, जसबाट मानवता आफ्नो भविष्य को बारे मा जान सक्छ।
अल्बर्टको ठूलो को थियो?
इतिहासमा, त्यहाँ जुनसुकै तिनीहरूले लिन्छन् सबै कुरामा सफल भएका व्यक्तिहरूको लागि एक ठाउँ हो। अल्बर्ट वान बोल्स्डेड ईरलको परिवारमा जन्मिएको थियो: उनको अवस्था ठूलो थियो, त्यसैले उनी कहिल्यै काम गर्न सकेनन्। निष्क्रिय आलस्यता, अल्बर्ट को पसंदीदा विज्ञान: त्यो एरिस्टोले को काम को एक दार्शनिक र अनुवादक बन गयो। जब मानिसहरूले उहाँलाई विजेता र कृत्रिम मानिस सृजना गरेका थिए (golem) को सिर्जना गरे, उहाँले पेरिस र कोलोन विश्वविद्यालयहरूमा पढाउनुभयो। अल्बर्टले किताबहरूमा काम गर्न कहिल्यै रोक्न सकेन: उनले आफ्नो आफ्नै कामको 38 भोल्युमले यस धर्मशास्त्र र दर्शनशास्त्रमा प्रकाशित गरे। यी मध्ये अन्तिम "ओराकल" नामक किताब हो, जुन सन्तानहरूको विशेष चासो हो।
अल्बर्ट द ग्रेट थियो घटनाहरु मा रुचि थिएन कि क्रोनोलोजी मा बंद थिए। उनको सबै अचम्मलाग्दो विस्तृत भविष्यवाणीहरूले भविष्यलाई संकेत गर्दछ, 400-1000 वर्ष जीवन बिताए। तिनीहरूका विवरणहरू आश्चर्यचकित भए पनि वैज्ञानिकहरू-फ्युस्टस्टिस्टहरू अनुभव गरे:
"भविष्यमा, हर्कुलसको खण्डबाट मानिसहरूले एक ठूलो बैंक खोल्नेछन् र यस भूमिले उत्तरी जनतालाई खेल्नेछ, यो एक महान राज्य बनाउँछ, जसको टाउकोमा क्रस हुनेछ।"
अल्बर्ट द ग्रेट संयुक्त राज्य अमेरिका को बारे मा कुरा गरे - बसोबासहरु नयाँ पृथ्वी मा विभिन्न प्रकार को विद्यालयहरु र क्रिश्चियन चर्च को दिशाहरु को स्थापना गरे, जसलाई अझै पनि देश को मुख्य धर्म मानिन्छ। यदि ठूला शहरहरूमा धार्मिक विश्वासहरू अपेक्षाकृत कमजोर हुन्छन्, त्यसो भए कि यो प्रान्तमा कल गर्नु हो कि यो ख्रीष्टको अमेरिकिको बीचको कत्तिको बलियो हो।
"अर्को 700 वर्षमा सम्पूर्ण संसारमा विजयको कगारमा जर्मनी तेस्रो हुनेछ।"
सारा देशलाई सबभन्दा कम गर्न युरोपेली देश साँच्चै तीन पटक प्रयास गर्यो। पहिलोमा, चार्ल्स वी हब्सबर्गले एक साथ पवित्र रोमन साम्राज्य र स्पेनको राजाको शासक हुन सक्थे। XIX-XX शताब्दीमा, प्रिसियाले जर्मन साम्राज्यको प्रभाव बढाउने निर्णय गरे। र सम्पूर्ण संसार कब्जा गर्न जर्मनहरूको सबैभन्दा खतरनाक र क्रूर प्रयास, दोस्रो विश्व युद्ध थियो, हिटलरबाट हटाइयो।
"जर्मन मान्छे कहिल्यै पूर्णतया एकताबद्ध हुनेछैन किनभने जर्मनीले पुरातन रोमीहरूको आत्माको अपमान गर्यो।"
मानवताको लागि के हो?
बर्बरियनको राजा, गेसेसरिचले 455 मा रोमलाई नष्ट गर्ने निर्णय गरे र यसलाई आगो लगाए। गुस्सा, रोमन आकस्मिकहरूले जर्मनमा अभिशाप गरे। तिनीहरूले चाहन्थे कि यो मान्छे कहिल्यै एक हुन सक्दैन र धेरै जनजातिहरूमा विभाजित हुनेछैन। यस दिन, जर्मनहरू तीन भिन्न देशहरूमा रहन्छन्: जर्मनी, स्विट्जरल्याण्ड र अस्ट्रिया। त्यहाँ एकता र भाषणको कुनै कुरा छैन।
अल्बर्ट द ग्रेटको पूरा भविष्यवाणीले कुनै शङ्का नछोडेको छ कि वैज्ञानिकले वास्तवमा कुन सभ्यताको शताब्दी पछि पर्खाइरहेको थियो भनेर थाहा थियो। उनको सबै भविष्यवाणी धारणाको लागि अत्यन्त सरल छ:
"मानिसहरू कारहरू, मञ्च बन्दुकहरू, तर केही समयपछि अनावश्यक बालबालिकाको रूपमा बसाल्नेछन्।"
मानिसजातिले पहिले नै अल्बर्टका शब्दहरूको पहिलो भागलाई सम्बोधन गरेको छ: मानिसहरूले आफ्ना सुविधाको लागि मिसिन र रोबोटहरू सिर्जना गरे। तर हरेक वर्ष त्यहाँ कारखानाहरू त्याग्नुपर्छ कि बढ्दो आत्मविश्वास हो: तिनीहरू खतरनाक थकानहरूसँग वातावरणलाई प्रदुषण गर्छन्। युरोप र एशियाका धेरै देशहरूमा साइकलले चल्ने पर्यावरणको अनुकूल यातायातको रूपमा लोकप्रियता पाइरहेको छ।
"अल्बर्ट ठूलोको मृत्युपछि, 700-800 वर्ष बितिसक्नेछ र मानिस चन्द्र र मंगललाई उडान गर्नेछ। मानिसहरू रोक्न र भविष्यमा तिनीहरू अन्य ग्रहहरू र अन्य संसारहरूमा उडिनेछन्। "
पहिलो पटक एक पुरुषले चन्द्रमा खुट्टा सेट गर्न सक्दो रहेछ 700 वर्ष पछि वैज्ञानिकले जीवनको संसार छोडे। कोलोन गर्न मर्से लगभग 25-30 वर्षमा योजना बनाईएको छ: "रातो ग्रह" को सतहमा 2050 सम्म स्थलीय नजिकैको अवस्थाहरूमा रहन आशा गर्दछ। यदि अवधारणा समय पूरा हुनेछ, छुट्ट्याउनुको मिति अल्बर्ट द ग्रेटको मृत्युको 800 औं वर्षको साथ संगत हुनेछ।
"एन्जिल्स अल्बर्ट द ग्रेटको मृत्युपछि 1000 वर्ष स्वर्गबाट ​​आउनेछन्, जस्तै एथेल्लिभियन समय।"
जीवनको उत्पत्ति र विश्व धर्मको बारेमा पागल सिद्धान्तहरूमध्ये एक जनाले आश्वासन दिए कि पृथ्वीमा पहिलो मानिस एलियंसले ल्याए। तिनीहरूको पछि लाग्ने मानव कल्पना र अलौकिक क्षमताहरू छन् जसले स्वर्गदूतहरूलाई "बदल्यो"। अल्बर्ट द ग्रेट एक गहिरो धार्मिक व्यक्ति थियो र "एलियन्सको सिद्धान्त" को बारेमा थाहा पाउन सकेन: त्यस्ता धारणाहरु को लागी बस दाँत मा मारियो। यद्यपि, "ओरालो" मा यो स्वर्गबाट ​​स्वर्गदूतहरूको आगमन बारेमा, एलियन्सको वर्णनमा समान भनिएको छ।
"अल्बर्ट ठूलोको मृत्यु पछि 800 वर्ष भन्दा बढी अवस्थित हुनेछैन।"
इस्लाम विश्व धर्म मध्ये एक हो, जसको प्रतिनिधिहरु संसारका हरेक कुनामा भेट्टाउन सकिन्छ। आधुनिक संसारमा, धेरै मानिसहरूले यसलाई नकारात्मक रूपमा मान्छन्: मुसलमानहरू दृढतापूर्वक युद्ध, आतंकवाद र शरणार्थीसँग सम्बन्धित छन्। यदि वैज्ञानिक यहाँ ठीक छ भने, त्यसपछि इस्लाममा अस्तित्वमा केही दशक भन्दा बढी छ।
"मानवताको सबैभन्दा भयानक परीक्षण अर्को अल्बर्टसमा मृत्युको पछि अर्को 1000 वर्षमा हुनेछ, र त्यसपछि मानव जातिको स्वर्ण युग आउनेछ। नयाँ द्वीप समुहको किनारबाट उठ्नेछ, र पुरातन द्वीपले हर्कोलस स्तम्भहरूको पछाडीको पानीबाट यसको माछा उठाउनेछ। "
पुरातन मिस्र र युनानमा पनि यो भविष्यवाणी गरिएको थियो कि अटलांटिस मानवता पुनरुत्थानको साथ जीवनको पूर्णतया नयाँ युगको प्रतीक्षा गर्दैछ - बिना रोग, मृत्यु र प्राकृतिक आपदाहरू। ब्लसोस मान्छे को पीडा को माध्यम ले आना चाहिए - पुरातन पुरातनता को गोरखाहरु लाई भन्नुहोस, र अल्बर्ट द ग्रेट। अटलांटिस को उपस्थिति ब्राजील को तट को अपेक्षा गरिएको छ, जो दुई वर्ष पहिले एक अज्ञात महाद्वीप को अंश भेटिन्छ।
"संसार तीनवटा ठूला राज्यहरूमा विभाजन गरिनेछ, र केवल परमेश्वरले तिनीहरूलाई बीचको विवाद समाधान गर्न सक्षम हुनेछ।"
21 औं शताब्दीको सुरुमा, सबै देशहरूमा, ती जनसंख्या, परमाणु शक्ति र प्रविधिहरूको आधारमा उन्नत मानिन्छ। तिनीहरू चीन, संयुक्त राज्य र रूस हुन्।
तिनीहरू प्रत्येकको चासो प्रायः एक-अर्कासँग टकराउँछन्, त्यसैले राजनीतिक उद्देश्यका लागि एकता युपिपियन देखिन्छ। अल्बर्ट द ग्रेट अर्थशास्त्र र आर्मामुनिहरु को आगामी दौड को बारे मा थाहा थियो र ईश्वरहरुलाई आमंत्रित गरे कि भगवान को शक्ति मा भरोसा गर्न को लागि, दुनिया लाई शांति प्रदान गर्न को लागी। सम्भवतः, यो वैज्ञानिकको सबैभन्दा आवश्यक भविष्यवाणी हो, जुन पृथ्वीमा सबै मानिसहरू पर्खिरहेका छन् भन्ने प्रमाणित गर्दै!
नाम मार्क के हो?
निकट भविष्यको लागि नोस्ट्रामामसको 10 भविष्यवाणी, जो वास्तविकताको नजिक हुनुहुन्छ
Stigmata: परमेश्वरको चिन्ह वा शैतानको चिन्ह?
सेमेनको नाम के हो?
दूतावासको पेरू बेलारुसमा
नाम आर्सेनीय के हो?
यो हामी आशा गर्नुभएन: 10 जना ज्ञात तथ्याङ्कहरु वुडको संस्कृति बारे
यूक्रेनको दूतावासको पेरू
त्रिन को कवरेज को रहस्य को हल: कैनवास वास्तविक छ!
निकिताको नाम के हो?
दूतावासमा ग्रेनेडामा दूतावास
युक्रेनमा दूतावासको दूतावास
स्टीफन हकिंगले अपोलिक्सिसको भविष्यवाणी गरे: "महासागर फोडा र एसिडको वर्षा हुनेछ!"
माया किन बनाउने सपना?
सांता, मेरो खराब बानीहरू लिनुहोस्!
जाडोमा कसरी वजन गुमाउने?
आफ्नो हातमा चटाई विकास गर्दै
खुट्टाको बाली कम गर्दछ - कारण
छट्पटिँदै गर्दा भाग्य
वियना मा स्किट्जेल
वांगो टंगो महोत्सवमा वेभ स्टेफानीले सगाईको रङ्ग देखाए
Suede प्लेटफार्म जूता
सोफा मा गद्दे चटाई
बाक्लो प्लास्टिक बनाइयो
पोषण प्रशिक्षणमा वजन घटानेको लागि
Melissa officinalis - गुण र लोक चिकित्सा मा आवेदन
हल्का-जुत्ता6छेदहरू
गर्भावस्थाको समयमा खुट्टाको सुँगुर - के गर्न को लागी?
वजन घटानेको लागि उचित पोषण
रगतमा रातो रातो रक्त कोशिका बढ्यो
पहेंलो फोर कसरी पिउने?